पेशल आचार्य | मझेरी डट कम
editor — Mon, 11/16/2015 - 05:29
एउटा कथा भन्छु अब गीत तिम्रो लुकेको छ
जिन्दगीका सत्येसत्ये वाचा कसम लुकेको छ ।
बालकैमा हामी दुई कतिकति सँगै खेल्थ्यौ ?
धूलामाटाँ लडीबुडी खोला हुँदी पौरी खेल्थयौ ।
हाँच मिलाई हामी साथी खेल्दा कति हाँसेका छौँ
जिन्दगी यो रङ्गीन पार्न आकाश धर्ती नाँचेका छौँ ।
editor — Sat, 11/07/2015 - 18:47
थप्पड रोग (बालकथा)
editor — Sun, 11/01/2015 - 23:52
रोगको संसारमा अर्को एउटा नयाँ रोग थपियो– थप्पड रोग ।
एकादेशमा एउटा अत्यन्त फोहरैफोहरले भरिएको ठूलो सहर थियो । त्यस सहरमा मानिसहरू मात्रै थुप्रिएका थिएनन् ससाना परजीवीहरू पनि राम्रैसँग सहजाएर बसेका थिए । त्यस्ता परजीवीहरूमा झिँगा, लामखुट्टे, उडुस र उपियाँको संख्या धेरै थियो । गाईभैँसी पालेर दूधदही खाने संस्कार क्रमशः कम हुँदै गएको त्यस फोहर नगरीमा रहेका सबैखाले मानिसका घरघरमा कुकुर र बिरालाहरू पाल्ने संस्कृति बढोत्तरी हुँदै गएको थियो ।
जगदीश घिमिरे: फूलजस्ता नरम र बज्रभन्दा कठोर
editor — Mon, 10/26/2015 - 04:06
editor — Sun, 10/18/2015 - 03:14
धेरै कुरा गर्यौ तिम्ले
अब नयाँ काम गर ।
विश्वासका वीउ छर ।
दीगो संविधान बनाएर
लोकतन्त्रलाई उपहार देऊ ।
ह्रास भएको आफ्नो पुरानो
बाँकी इज्जत अब फिर्ता लेऊ ।
editor — Mon, 10/12/2015 - 00:30
सबैभन्दा पहिलो सन्दर्भचाहिँ नेपाली उपन्यास साहित्यमा रोचक, घोचक, सरल, सरस र समसामयिक यथार्थपरक शैलीमा विदेश जाने लाहुरेहरू र उनीहरूका आफन्तको अति करुण तथा मार्मिक कथामा आधारित मलाया एक्सप्रेस नामको सफल सामाजिक उपन्यास लेख्नुभएकोमा युवा उपन्यासकार अखण्ड भण्डारीलाई गाउँका सामान्य पाठकको हैसियतले म धेरैधेरै धन्यवाद् दिन चाहन्छु । अनि चाहन्छु म उनको कलमको नमन गर्न पनि । हामीजस्ता ‘घरकै लागि घरदेखि बाहिर बसेको छु’ भन्दै देशमै बस्ने सानु पेसामा पन्पिएका जन सामान्यलाई त उनको यो उपन्यासले यति गहिराइमा गएर छुन्छ भने विदेश जानुअघि घरपरिवारका करकापमा परेर अनिच्छुक भई बिहे गरेको पन्ध्रदिन पनि बित्न नपाई अँगालाभरिकी स्वास्नी, ससाना चिलिला भाइबहिनीहरू र डाँडामाथिका जून भैसकेका बाआमालाई धरधर्ती रुवाएर परदेशका बन्जर धर्तीमा आफ्नो सीप र ऊर्जालाई खन्याउन जाने ती तमाम आधुनिक मदनरूपि जितबहादुरहरू जसको रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रको धुकधुकी धानिरहेको छ । उनीहरूलाई पनि सम्मान गर्दै यो आलेखको आरम्भ गर्न चाहन्छु ।
editor — Mon, 10/05/2015 - 00:13
घरखेत साहूलाई छाडी अरबैमा आएको छु
मरुभूमि मेरो भागमा विरह गीत गाएको छु ।
नानीबाबु भन्न मैले वर्ष दुएक कुर्नु पर्छ
पराईको देशमा मेरो आफ्नै भावी जुर्नु पर्छ ।
साँबाब्याज लगातारै सगरमाथा चढ्दै होलान्
सरसापट, तिरोभरो अक्कासेर बढ्दै होलान् ।
माघी आयो भन्छन् राजै
editor — Fri, 09/25/2015 - 02:55
माघी आयो भन्छन् राजै, सिरेटोले हानेको छ
घर छाडी बसेको छु नि राजै, कुहिरोले छेकेको छ ।
लालाबाला पखिँदा छन् हाम्रो बाबा आउँछ भनी
लोसार बित्यो, उभौँली नि बाटो हेरी दिन गनी ।
दसैँतिहार रमाएरै हामी सबै साथै बस्दा
चिहिलबिहील पार्यो होला नि विछोडमा आँसु खस्दा ।
पूजा गर्ने छाउरो
editor — Fri, 09/18/2015 - 12:04
‘लुलुलु यस्ले यहाँ फोहर गरिहाल्यो नि !’– तबिल्दारनी हजुरआमाले तबिल्दार हजुरबा पूजागरिरहेका बेला पूजाकोठामा गएर पिसाब गर्ने बेलायती कुकुरको छाउरोलाई कानमा समात्दै उचालेर काइँकाइँ गराउँदै बाहिर ल्याउनुभयो ।
‘एकाबिहानै फेरि जिमराजले मलाई अशुद्ध बनाइदियो बा’ –पूजा चौकाबाटै तबिल्दार हजुरबा कराउनुभयो । बूढा फेरि उठेर इनारमा गई नुहाएर दोस्रोपटक पूजामा बसे फत्फताउँदै, ‘श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे ! हे नाथ नारायण वाशुदेव ।’
editor — Sat, 09/12/2015 - 16:52
सोमबारे हाटनेर ठूलो नहर पर्थ्यो । तराईमा पानी ल्याउने लैजाने मानव निर्मित पानी बग्ने माध्यमलाई नहर भनिन्छ । सप्तकोसी नदीबाट ल्याइएको नहर हुनाले त्यहाँ निकै पानी बग्थ्यो । त्यो नहर गहिरो थियो ।
अहिलेजस्ता यतिविधि टिभि च्यानलहरू घरघरमा थिएनन् ।
editor — Sun, 09/06/2015 - 04:28
धेरै वर्ष आँखा जुधे बल्ल पाहोर हाँस्यौ तिमी
पोको पारेँ हाँसो मैले, पराई माया गाँस्यौ तिमी ।
अति सोझो भनी मलाई यस्तो आरोप लागेको छ कि ?
भेट गर्न तिमीसँग भित्री आँत जागेको छ ।
मेरो फिराद कहाँ हालौँ ? कस्को त्यो अदालतमा ?
बयान मैले कसलाई दिऊ ? कस्को त्यो अदालतमा ?
editor — Tue, 08/25/2015 - 04:35
‘खोदा पहाड निक्ला चुहा’पोष्टाचार्य (विद्यावारिधि)ले पनि त्यति ज्ञान प्राप्त गर्छ कि गर्दैन आफ्नो थेसिस् पास भएपछि र डाक्टर लेख्न थालेपछिको खुसीयालीमा । समग्र पहाड खनेपछि मुसो निस्कियो । कति निराश भयो होला त्यो अविश्रान्त र अविदित अभियन्ता ? तर जीवनको सोपानमा निराशाले कबै स्थान पाउन सक्दैन । खोज्नेलाई थाहा नै हुँदैन । म के खोजिरहेको छु । मैले पाउने के हो ?
सिन्दुर मैले बोकी राखेँ
editor — Sun, 08/23/2015 - 04:10
सिन्दुर मैले बोकी राखेँ छर्न पाइनँ सिउँदोमा
होला मिलन पर्खिरा’छु भेट हुन्छ कि जीउँदोमा ।
परिस्थिति हिउँदको कुहिरो बनी छेक्दो रै’छ
आफैँ भित्र ग्लानि हुँदा त्यसैले नै रोक्दो रै’छ ।
हत्केलामा फिँजाएको सिन्दुर अब रातै भयो
तिम्रो नाम जप्दाजप्दा सास मेरो तातै भयो ।
मुस्कान बेग्लै पाएँ
editor — Thu, 08/13/2015 - 03:41
मुस्कान बेग्लै पाएँ मैले तर ओठ उही छ
प्रहार फरक भयो अहिले तर चोट उही छ ।
उम्रिएँ, बढेँ, फूलेँ, फलेँ तर बोट उही छ
बैगुनीलाई गुनले मारेँ तर खोट उही छ ।
सयौँ चोटी धोएको छु तर कोट उही छ
सम्झनाको फेरियो रुमाल तर बुनोट उही छ ।
हल्लाको देश र विदुषक नेताहरू
editor — Sat, 08/08/2015 - 18:38
कृपया म मेरो देशलाई सहस्रपटक नमन गर्दै माथिको शीर्षकमा लेख लेख्ने अनुमति मातृभूमिसँग माग्न चाहन्छु ।
अन्तर्मनको आवाजलाई निकाल्नै यो शीर्षकमा लेख लेख्नु पर्ने भयो । मेरा आदरणीय पाठकहरू ! मेरा सम्पादकहरू अहिले हामी चाहेर होस् या नचाहेर होस् इतिहासको त्यो संगीन घडीमा उभिएका छौं । जहाँबाट हामीले सम्पूर्णमा मनहरूको सकारात्मक र सही सम्मिलन गरेर सहमति गर्न सक्यौं भने हामी यो शताब्दीकै उच्च राजनीतिक फड्को मार्ने तयारीमा छौं । मेरो मनले भन्छ त्यो हुन सक्दैन किनकि मेरो देशका नेताहरूलाई मैले नेमुनि कै पालादेखि फेहरिस्त लगाएर पढ्दा त्यस्तो पाएको छैन ।
यत्ति धेरै माया किन